← मर्यादा विपरीत विदेशीहरु मुस्ताङमा	हुनेलाई दशैं तिहार नहुनेलाई … … … →	दशैंको, दशा र हाम्रा नियतिहरू	20
समाज रूपान्तरणको आशा र भरोसा गरेका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले कसरी दशैं मनाउलान् ? के-के गर्लान् भनी जिज्ञासा हुनुलाई अन्यथा मानिंदैन । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको निजी मामिला भए पनि जनताहरूले चियोचर्चा गर्दा विगत वर्षहरूको तुलनामा भनाइअनुसार गराइयो, फरक नपर्ला भनी सकारात्मक सोच राख्न सकिन्छ । कसैलाई बाबुको बाध्यता, कसैलाई सासूको बाध्यता र कसैलाई आमाको बाध्यता भन्दै टीकाटालो भयो भने जनता के सोच्लान् ? यसबारेमा एउटा उपयुक्त सोच बनाउंदा राम्रो हुने हो ।
← मर्यादा विपरीत विदेशीहरु मुस्ताङमा	हुनेलाई दशैं तिहार नहुनेलाई … … … →	One response to “दशैंको, दशा र हाम्रा नियतिहरू”	धुर्मुसे राइंलो	सेप्टेम्बर 20, 2009 at 1:49 बेलुका	झलनाथको जालझेल केपीको बोली